ख्याक, राजनीति र क्रान्ति- विविधा - कान्तिपुर समाचार
भाद्र ७, २०७६ अभि सुवेदी
नेपालमा अहिले इतिहासको व्याख्या गर्ने र बोध गर्ने अनौठो तरिका निस्केको छ । यहाँ इतिहासको अध्ययन विषयमा खासै गतिला बहस हुँदैनन् । विषयका विद्वानहरूले लेखेका प्रकाशित कैयौं किताब हेरेर भन्नैपर्छ, ती कतिपय राम्रा छन् ।
तर जुनबेला इतिहास चक्रवातजस्तो भएर वर्तमानका दरबाजा हल्लाउन थाल्यो, नेपालमा त्यो इतिहासको व्याख्या गर्ने कर्म गर्ने जिम्मा पाएकाहरू, इतिहास विश्लेषकहरू अगाडि देखिएनन् । उनीहरूले इतिहासलाई अत्यन्तै भावुकतावश व्याख्या गरे । त्यो मूलतः राजनीतिक बहुल विचारका संस्कृतिले प्रभावित नभएर केही प्रमुख दलका इतिहास र व्यक्तिका ‘न्यारेटिभ’हरू लिएर व्याख्या गरियो ।
राजनीतिमा धेरै कालसम्म दलहरू बनाम नारायणहिटी वा राजा भनेर व्याख्या गरियो । राजा वा राजदरबार नभनेर ‘माथि’ भन्ने लक्षणा वा भाषाशास्त्रमा भनिने ‘मेटोनिमी’को प्रयोगद्वारा व्याख्या गरियो । शक्तिको केन्द्र थियो, त्यो ‘माथि’ । त्यसबाट नै बोलीचालीमा प्रयोग हुने मूल भाष्य र भाषिका निस्के । त्यो ‘माथि’ भनिने यस्तो लक्षणा भयो कि त्यसको व्याख्या गर्नेभन्दा त्यसलाई रहस्यमय बनाउँदा बढी तरङ्ग जन्मिने बुझाइ निस्के ।
यसो आँखाको इसारा गरेर नारायणहिटीतिर संकेत गर्दै ‘माथि’ भन्ने मनुवाहरूका रोमकुपहरूमा संवेदना दौडिएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना ठूला दर्शन, सामाजिक सिद्धान्तहरूलाई अघि सारे पनि आखिर त्यो ‘माथि’लाई छाडेनन् । केही गडबडी भए भने ‘माथि’ सक्रिय छ, यसमा ‘माथि’को हात छ भन्ने भाषिका भरमार प्रयोग हुन्थे ।
व्यापारी र विदेशतिर धन, स्वर्ण अनि अवैध कारबारमा ‘माथि’को हात छ भन्ने भाषिकाहरू जताततै सुनिन्थ्यो । राजाको व्यक्तित्व र ‘मुड’ विषयमा अनेकौं अनुमान लगाइन्थे । हुँदाहुँदा माओवादी युद्धका बेला प्रचण्ड भनेकै राजा वीरेन्द्र हुन् भन्नेसम्मका भाषिकाहरू जन्मे । राजदरबार भनेको राजाका भाइभारदार र बडा कर्मचारी अनि एकाध सैनिक अधिकृतहरूको संयुक्त नाम हो भन्नेतिर कसैको ध्यान थिएन ।
त्यो माथिको वृत्त परिवेशभित्र खेल्न कुशल राजा महेन्द्रले त्यो बेलाका राजनीतिक दलका वीर–वीर नेताहरूलाई पनि पञ्चायतमा ल्याएको कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यो बेलाको निकै शक्तिशाली मानिएको कमिनिष्ट पार्टीका केशरजंग रायमाझीदेखि शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय र त्यही तहका अनेकौं कमिनिष्ट नेताहरू, कांग्रेसका परशुनारायण चौधरी लगायत महेन्द्रको पञ्चायत दर्शनका व्याख्याता मात्र भएनन्, शासन गर्नेसम्मका काममा ती सामेल भए ।
मलाई आश्चर्य लाग्ने एकाध अरु कुरा छन् । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३’ पछिको नेपाली राजनीतिमा युगान्तकारी परिवर्तन आए । अनि १५ जेठ २०६५ को दिन राजतन्त्र समाप्त भयो । नेपालको संविधान २०७२ पनि लागू भयो । यी परिवर्तन अभूतपूर्व हुन् ।
यस्तो स्थितिमा पनि पहिलेका र अहिलेका कमिनिष्टहरू बीचमा भएका छलफलमा मैले केशरजंग रायमाझीको नजिक र पुष्पलालको नजिक भएका हामी कमिनिष्ट भन्ने नेताहरूका भाषण सुनेँ । राजाको नजिक रहेका रायमाझी पन्थी प्रचण्डहरू अनि पुष्पलालको नजिक रहेका हामी बाबुराम भट्टराई समूह भनेर हाम्री एक मित्र र विद्वान नेतृले आदित्य अधिकारीले लेखेको बुलेटबाट ब्यालेटमा परिवर्तन शीर्षक किताबको २०७१ को हिउँदमा भएको एक विमोचनमा भनेपछि चिन्तनशील भएँ । मलाई लाग्यो, नेपालका राजाहरू जाक डेरिडाले भनेजस्तो नेपाली राजनीतिमा भूत वा अमूक ख्याकको रूपमा जीवित रहनु अनौठो छ ।
कमिनिष्ट र कांग्रेसका नेताहरूले निकालेका भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्र फेरि सक्रिय हुँदैछन् र एउटा अमूक समूह यसमा शक्ति हत्याउन लागिपरेको छ भन्ने भाषिकाहरू सुनिँदै आएका छन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतले पनि संसदमा यो कुरा भने । त्यति मात्र होइन, यस विषयमा उनले सर्वदलीय बैठक बोलाएर यस विषयमा सबै दलका नेताहरूलाई सचेत गराए । यसको अन्तर्यमा के छ भन्न सकिँंदैन ।
म न त भुपु राजा ज्ञानेन्द्रको समर्थक हुँ, न तिनले फेरि अहिलेको व्यवस्थालाई हल्लाएर उत्पात मच्चाएर वा सुटुक्क शक्ति हात पार्नेछन् भन्नेमा विश्वास गर्छु । ती कसको माध्यमबाट आँधी भएर आउँदैछन् त ? के राप्रपा त्यस्तो चुनामी हुने सम्भावना बढेको उनीहरूले देखेका छन् त ? भनिदिनुपर्‍यो, यत्रो उथल–पुथलको सम्भावना । म त यस कुरालाई वृथा काल्पनिकी र राजनेताहरूले गर्ने, नाम जुराउने हो भने, ‘समय नष्ट विलासिका’ भन्छु ।
यति धेरै क्रान्ति र परिवर्तनको इतिहास छ, यति धेरै मानिस प्रजातन्त्रको निम्ति बलिदान भइसकेका छन्, अब यो व्यवस्था बाहेक अरु कुनै पनि व्यवस्था आए तिनै जनताले प्रतिवाद गर्छन् । स्वतन्त्र मिडिया छ, बलियो छ, त्यसले प्रतिवाद गर्छ । त्यही कारणले मिडियाको महत्त्व मान्नुपर्ने हो ।
भूपू राजा ज्ञानेन्द्रले के गर्दैछन्, त्यो एउटा रहस्य कसरी भयो, आजको मुक्त नेपालमा ? आजका सचेत मिडिया, हामी सबैलाई केही पनि थाहा नहुने यो कस्तो खेल हुँदैछ त ? दलहरूको नेतृत्व वर्गभित्रको यो काल्पनिकीको स्रोत के हो ? केही अनुमान गर्न सकिन्छ । लाग्छ, कमिनिष्ट पार्टी र कांग्रेस पार्टी आफ्नो दलको, आफ्नै घरको स्थिति वा कुन नेता माथि र कुन नेता तल भन्ने ‘अर्डर’ मिलाउन नसकेर, कुनै ‘बुगी’को कल्पना गर्दै ध्यान उतातिर मोड्न चाहन्छन् । अर्कोतिर कश्मीरमा भारतले धारा ३७० खारेज गरेर उठ्ने तरङ्गले अहिले नै यहाँ केही उथल–पुथल ल्याउने र राजनीतिक चिन्तन र नीतिमा असर पार्ने छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
मलाई यस्तो पनि लाग्छ, पहिलेको ‘माथि’ भन्ने ख्याकले अहिले पनि सत्तामा बस्ने शक्ति र राजनीतिक चिन्तालाई छाडेको छैन । राजतन्त्र गइसके पनि त्यसको ख्याक वा भूत उजागर गरेर ल्याउने इतिहासभित्रको अवचेतनले अहिले पनि काम गर्दैछ, सायद । इतिहासमा यो प्रेत सिद्धान्तबाट इतिहास व्याख्या गर्नेमा मैले धेरै पढेका र केही पढाएका पनि एक दार्शनिक छन् ।
तिनको नाम हो, फ्रान्सेली जाक डेरिडा (१९३०–२००४) । तिनले लेखेका धेरै दर्शन र साहित्य समीक्षामा मलाई हल्लाएको विषय भनेको मार्क्सका भूतहरू अथवा ‘स्पेक्टरस् अफ मार्क्स’ (१९९४) हो । डेरिडाले यो पछि किताबको रूप लिएको बहस सोभियत संघको १९८९ तिर अन्त्य भएपछि अनि पूर्वी युरोपका कमिनिष्ट देशहरू भकाभक स्वतन्त्र हुँदै गरेको अवस्थाले जन्माएका थिए ।
के मार्क्सको मृत्यु नै भइसक्यो त ? के अब फ्रान्सिस फुकुयामाले इतिहासको अन्त्यमा भनेजस्तै त्यो अवस्थाको इतिहास सकियो त ? सोझै भन्दा मार्क्स मरेकै हुन् त ? भन्नेजस्ता विषयमाथि डेरिडाले यो पुनरावृत्ति हुने प्रेत सिद्धान्तको प्रयोग गरे । अनि भने, मार्क्सलाई अनेकौं अवतारमा आउने र प्रभाव पार्ने भूत वा ‘स्पिरिट’को रूपमा हेर्नुपर्छ । उनले भने, फुकुयामाले भनेको समयभन्दा अघि नै सन् पचासतिरै कमिनिष्ट ह्रासोन्मुख हुँदै गएको थियो । यसमा उनले पूर्वी युरोप र प्रागमा रूसी ट्याङ्कहरू कुदेको उदाहरण दिएका छन् ।
डेरिडाले भने, यस्तो इतिहासको ख्याकको कुनै स्थिर पहिचान हुँदैन । तर यसले अगोचर नै सही, तर्साइरहन्छ । यो अस्पृश्य छ, विदेह छ । तर यसमाथि अरुको देहको पनि कल्पना गरिन्छ । त्यो आउँछ, तर अरु कसैको रूपमा पनि आउँछ । उनी भन्छन्, त्यो को हो भनेर हामी त्यसको पहिचान वा व्यक्तित्व वा चेतना इत्यादिलाई खुट्याउन हतार गर्दैनौं (पृष्ठ १३) । राणातन्त्र होस् या राजतन्त्र होस् या सामन्ती तन्त्र होस्, त्यसको ख्याकको पहिचान गर्न नसक्नु कमजोरी हो ।
त्यो कमजोरीले गर्दा हामी तिनका प्रेतहरूका, तिनका ख्याकहरूका कल्पना गर्न थाल्छौं । अहिले त्यो कालिक चेतबाट वा हिजोको ख्याकबाट हामी मुक्त भएका छैनौं कि त ? ‘शमी’ साहित्यिक पत्रिकाको प्रवेशाङ्कको आत्मस्वीकृत मूलक निबन्धमा पूर्व माओवादी नेता सांसद दीनानाथ शर्माले लेखेका यी हरप वाचाल छन्, ‘युग फेरियो, आदत फेरिएन । सामन्त ढल्यो, कुशासन ढलेन । नयाँ कानुन बन्यो, संस्कार बदलिएन । चालक फेरियो, थोत्रो गाडी फेरिएन’ (४०) । त्यसैले राजनेताहरू जसमा मित्रहरू र विद्यार्थीहरू पनि छन्, मेरो भनाइ के छ भने समस्याको निराकरण गर्न रहस्यवादी नहुनुहोस् ।
यथार्थ के छ, त्यो भन्नोस् । देश निकै अप्ठ्यारोमा पुगिसक्यो, त्यसलाई बचाउनुहोस् । स्वतन्त्र चेतनाका सम्वाहक संस्था विश्वविद्यालयहरूलाई बर्बाद नगर्नोस् । बर्बाद गर्नु भनेको ख्याकबाट मुक्त हुनसक्ने चेतना गुमाउन सहज बनाउनु हो ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारीसँग त्यो चेतना थियो । पढेका छौं, सम्झेका छौं । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले अदालतमा दिएको बयानमा भनेको यो कुरा मनन गर्ने काम अमूक दललाई जिम्मा नलगाउनुहोस् ।
बीपी इतिहासको ख्याकबाट यो कारणले मुक्त व्यक्ति थिए । उनले भने, ‘समाजको कुपमण्डुकता, अन्धविश्वास, बौद्धिक दासता, रुढीवाद, सामन्ती मनोवृत्ति, दरिद्रता र त्यसबाट उत्पन्न हुने तमाम अवाञ्छनीय दुर्गुणहरूको अन्त्य हुनुपर्छ... । राजनीतिक क्रान्तिले यही समग्र सामयिक क्रान्तिका लागि उपयुक्त पृष्ठभ्मृि तयार पार्छ । म यस प्रकारको विचार र सिद्धान्तलाई मान्ने भएकोले पनि आफूलाई क्रान्तिवादी भन्छु ।’
मेरो विश्वास छ, सबैले ‘सच्चा क्रान्तिकारी’ भएर काम गर्नुहुनेछ । प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०८:३८
भाद्र ७, २०७६ संजिला तामाङ
‘भोज गर्छु, रमाउँछु, खान्छु खीरैखीर, पोइ मेरा लाहुरे मलाई केको पीर’ यो अहिले घर–घरमा टेलिभिजन, रेडियो र उफरमा गुञ्जिने तीज गीत हो । त्यसैगरी अरू गीतका केही अंशहरू पनि हेरौं— ‘भिनाजुले किन्देको सेतो घडी नाडीमा, टलटल सितारा रातो साडीमा, आज सानी चिटिक्कै छे शिरमा शिरफूल लाएर, हुनेखाने ज्वाइँ राजाको माया पाएर, खाडीको कमाइले किनिदेउ न बूढा मलाई स्कुटर, छोरालाई पल्सर ।’
हिजोआज दैनिकजसो गुञ्जिरहने तीज गीत प्रायः यस्तै छन् । हरेक सञ्चार माध्यममा यस्तै गीतहरू बज्ने गर्छन्, जसलाई हामीले सुनेर सहजै पचाइसकेका छौं । हामी यस्तै गीतमा यिनका भाव, अर्थ र प्रभावको कुनै वास्तै नगरी साडी–चोलो अनि भएभरका सक्कली–नक्कली गहना लगाएर कम्मर मर्काएर नाच्न तयार हुन्छौं । नाचिदिन्छौँ ।
खुल्ला समाजको अगाडि रमाइलो गरिरहन्छौं । यसो सोच्ने हो भने यस्ता प्रवृत्तिका गीतलाई पनि हामी कसरी सहस्र स्वीकार्छौं ? सुन्दै उकुस–मुकुस पार्ने हाम्रो सामाजिक सद्भाव, सामाजिक र नारीको मर्यादामाथि खुलेआम प्रहार गर्ने र विकृति भित्र्याउने यस्ता गीतमा रमाएर हाम्रो समाज अनि हाम्रो मर्यादा, संस्कार कता जाँदैछ ?
तीजका सबैजसो गीतले महिलालाई होच्याएर प्रस्तुत गरेका छन् । गीतका भाव हेर्दा महिलालाई रमाउन, मोज गर्न, भोज गर्न पनि पुरुषमै निर्भर हुनुपर्छ । तीजमा राम्री हुनलाई लगाउने साडी, चुरा, पोते, तिलहरी पनि पुरुषले नै किनिदिनुपर्छ । चाहे त्यो भिनाजुले नै किन नहोस् ।
एकछाक मिठो खान र लाउन लाहुरेलाई नै सम्झिनुपर्छ, श्रीमान, भेना, दाइ अनि यस्तै पुरुष पात्रको भर पर्नुपर्छ । अथवा उनीहरूको दैनिकी नै पुरुषमा परनिर्भर नभई चल्दैन भन्ने प्रस्तुति यी गीतहरूमा छन् । आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ, अरूमा भर पर्नुहुन्न भन्नेहरूलाई तीजका गीतहरूले मज्जाले खिल्ली उडाएका छन् । तर पनि हाम्रो समाजले यसलाई सहजै स्वीकारेको छ । नियमन गर्ने निकाय मौन छन्, गीत बजिरहेका छन् ।
तीजलाई महिलाको पर्व भनिन्छ । सुख–दुःख बाँड्ने, पारिवारिक जमघट, मेलमिलापको प्रतीकको रूपमा यस्ता चाडबाडलाई लिइन्छ । तर तीजका गीतले त मौलिक मूल्य–मान्यतालाई गलहत्याएर उपभोगवादी, महिलाको यौनिकता र पूर्णरूपमा उपयोगको साधन र परनिर्भर बनाई होच्याउने संस्कृतिलाई भित्र्याएका छन् ।
गीतहरू सुन्दा लाग्छ— यो महिलालाई होच्याएर अपमानित रूपले प्रस्तुत गर्ने पर्व हो । महिलाको पर्व भए त महिलाका हकहित, अधिकार र आत्मसम्मानको गीतहरू गुन्जिनुपर्ने हो । तर यस्ता खालका गीतहरू बजारमा आएकै छैनन् वा आए पनि बजाइएका छैनन् । सरकारी सञ्चार माध्यमले समेत महिलालाई अपमान गर्ने यस्ता गीत बजाइरहेका छन् ।
तीजका प्रायः गीतले महिलालाई परनिर्भर वस्तुको रूपमा चित्रित गरेका छन् । महिला भनेको श्रीमान वा पुरुषको अधीनमा चल्नुपर्छ, उनीहरूले भनेको मान्नुपर्छ, उनीहरूकै पैसामा राम्री, चिटिक्क पर्नुपर्छ, पुरुषमै निर्भर हुनुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । यी कुरालाई माथिका केही गीतको अंशले नै प्रस्ट पार्छन् । महिलाको स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, स्वतन्त्रता, पहिचानसँग तीजका गीतहरू जोडिएका छैनन् ।
के महिलाहरूले साडी, चुरा, पोते, घडी, स्कुटर किन्नलाई श्रीमान वा अरूमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने हो ? उनीहरू आफै किन्न सक्दैनन् र, के यी सबै कुरा किन्न उनीहरू स्वयम् आत्मनिर्भर भइसकेका छैनन् त ? कि हाम्रो मानसिकताले अझै पनि महिलाको आत्मनिर्भरता, स्वन्त्रतालाई स्वीकार्न नसकेको हो ? या अझै पनि हामीले महिलालाई एउटा वस्तुको रूपमा– जसको अस्तित्व अरूमा निर्भर हुन्छ, अरूबाट परिचालित हुन्छ— चित्रित गर्न खोजेका हौं ?
यदि हो भने अब यस्तो भ्रममा अल्मलिनु हुँदैन । यसले समाजलाई अघि बढाउँदैन, पछि नै धकेल्छ । समाज धेरै बदलिसकेको छ । यो बदलिँदो समाजले सधैँ एउटै कुरालाई एउटै रूपले हेर्दैन । हो, अझै धेरै महिलाहरू परनिर्भर हुनुपरेको छ, पढ्न पाएका छैनन्, रोजगारी छैन ।
घरको काम गर्ने, छोराछोरी स्याहार्ने, अरूले ल्याइदिएको खाने–लाउने, अरूकै नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । तर हाम्रा तीजका गीत त यस्ता महिलालाई पनि यो जञ्जालबाट बाहिर निकाल्नेगरी आउनुपर्छ । महिलालाई अझै सशक्त बनाउनेगरी आउनुपर्छ ।
छोरीहरू पनि शिक्षित बन्दैछन्, पढ्दै–लेख्दैछन् । आफ्नो खुट्टामा आफै उभिँदैछन्, केही कुरा गर्न र लेख्न सक्ने भएका छन्, निडर र स्वतन्त्र हुँदै गएका छन् । परम्परागत सामाजिक मूल्य–मान्यता विरुद्ध प्रश्न उठाउन सक्ने भएका छन्, लक्ष्मणरेखालाई नाघेर बाहिर आइसकेका छन् ।
महिला हिजो जति कमजोर र लाचार थिए, आज त्यस्तै छैनन् । महिलाहरू पनि देशको अग्र अथवा शक्तिशाली ठाउँमा पुगिसकेका छन् । काम गरेर पनि देखाएका छन् । त्यसैले यस्ता गीत बनाउँदा पुरानो मानसिकताबाट उठेर हेरौं, केही नयाँ, उत्प्रेरणा दिने खालको सोचसहित गीत बनाऔं ।
जथाभावी गीत बनाउँदा त्यसले सिँगो नारी जगतमाथि नै आँच पुर्‍याउन सक्छ । त्यो भनेको आमा, बहिनी, छोरी र श्रीमतीमाथिको अपमान हो । देवी शक्तिमाथिको प्रहार हो । जसले सन्देश राम्रो जाँदैन । जुन कसैको लागि पनि हितकारी हुँदैन ।
मान्छेलाई छिटै र सजिलै प्रभाव पार्ने शक्ति गीतमा छ । तर तीजका गीतले कस्तो सन्देश दिइरहेका छन्, मनन गरौं त ? अहिलेका नयाँ पुस्ता यस्तै गीत सुनेर हुर्किंदैछन् । उनीहरूले यिनै गीत गुनगुनाउँछन् । यस्तै गीतमा नाच्न तयार हुन्छन् । यस्ता गीतले उनीहरूको मनोभावमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? उनीहरूले के बुझ्लान् र सिक्लान् ?
यो पक्कै पनि विचारणीय कुरा हो । टीका, चुरा, पोते त अरूले नै किनेर दिनुपर्ने रहेछ भनेर सिक्दैनन् र ! ‘टीका, चुरा, पोते, धागो त केटामान्छेले ल्याइदिनुपर्ने रहेछ’ भन्ने ठाउँमा ‘चुरा, पोते, साडी, धागो त आफ्नै पैसाले किन्ने हो, आत्मनिर्भर बन्ने हो’ भन्नेजस्ता गीत बने अवश्य राम्रै सन्देश जाने थियो ।
प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०८:३७